चुकन्दर साह्रै धेरैले हेपेको तर असाध्यै जडी फल हो, जान्नुस यसको चामत्कारीक फार्इदाहरू ! – Online Khabar 24
चुकन्दर साह्रै धेरैले हेपेको तर असाध्यै जडी फल हो, जान्नुस यसको चामत्कारीक फार्इदाहरू !
पुरा खबर अघि follow गर्दिनुस,
प्रकृतिले यस्ता फल वा खानेकुरा दिएको छ, जो त्यही समयका लागि अति उपयोगी हुन्छ ।
अर्थात जाडोको मौसमका जे जति खानेकुरा उत्पादन हुन्छ, त्यो त्यही मौसममा हाम्रो शरीरले माग गरिरहेको हुन्छ ।
पात पनि फाइदाजनक – चुकन्दरको पात पनि निकै फाइदाजन मानिन्छ । चुकन्दरको पातमा फलको तुलनामा धेरै मात्रामा फलाम तत्व पाइन्छ । पत्तामा भिटामिन ए पनि भरपुर मात्रामा पाइन्छ ।
चुकन्दरको गाढा रातो रंग के हो ? – हेर्दै रहरलाग्दो गाढा रातो रंग हुन्छ, चुकन्दरको । आम बुझाई छ, यो रातो रंग फलाम तत्वको प्रचुरताको कारण हुन्छ । यद्यपी सत्य के हो भने, चुकन्दरको गाढा रातो रंग यसमा पाइने एक रंगकण अर्थात बीटा सायनिनको कारण हुन्छ । चुकन्दरमा पाइने फोलिक एसिड, पोटेशियम वा मुलायम रेशाले पनि यसको पौष्टिक गुणलाई बढाउँछ ।
एन्टी अक्सिडेन्ट गुणको कारण यो रंगकण स्वास्थ्यका लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ । चुकन्दरमा पाइने फोलिक एसिड, पोटेशियम वा मुलायम रेशाले पनि यसको पौष्टिक गुण बढाउँछ । चुकन्दरको नियमित सेवनले सम्पूर्ण शरीरलाई निरोगी राख्छ । हाल हाम्रो दैनिक आहारमा चुकन्दरले उचित स्थान पाएको छैन ।
यद्यपी नियमित रुपमा यसको सेवनले कतिपय रोग निर्मूल हुन्छ । साथसाथै यो सौन्दर्यको पनि खजना हो । यसले हेमोग्लोबिन बढाउाछ, फलत अनुहारको चमक बढ्छ । ज्ञान बिज्ञान डट नेट बाट साभार गरियको खबर
Prevउसिनेको अण्डा खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् यी ४ चिज, निम्त्याउँछ हृद’यघा’तको ख’तरा !
nextचिसो पदार्थ पिउने गर्नु हुन्छ ? पिएकाे एक घन्टा पछि शरिरमा यस्तो हुन थाल्छ ! जान्नुहाेस्